Ilaha Caafimaadka ee Qaxootiga - Isbahaysiga Caafimaadka Soogalootiga & Qaxootiga
Waxaa muhiim u ah CHC-yada iyo dhakhaatiirta inay fahmaan baahiyaha daryeelka gaarka ah iyo xaaladaha qaxootiga Afgaanistaan. Codsadayaasha SIV ee ku sugan Goobaha Badbaadada ah waa in ay maraan baaritaanka caafimaadka I-693, kaas oo loogu magacdaray Foomka I-693, dukumeenti loo isticmaalo in lagu wargeliyo baarista caafimaadka iyo tallaalada Adeegyada Dhalashada iyo Socdaalka Mareykanka (USCIS). Xaaladaha caadiga ah, baaritaankan caafimaad waxaa lagu qaadi doonaa dibadda, ka hor inta aan la rarin qaxootiga, laakiin xaaladda degdegga ah ee Afgaanistaan ​​ayaa taas ka hortagtay. Imtixaannada I-693 ayaa lagu qabtaa Goobaha Badbaadada ah, sidoo kale waa tallaalada joogtada ah iyo baaritaanka qaaxada.
Hoos waxaa ku yaal ilo dheeraad ah oo loogu talagalay in lagu caawiyo daaweeyayaasha si fiican u fahmaan xaaladdan oo ay siiyaan daryeel tayo sare leh qaxootiga Afgaanistaan. Liiskani wuu sii socon doonaa oo waa la cusboonaysiin doonaa marka ilo dheeraad ah la helo. Mar kale dib u eeg wixii ku soo kordha
Dulmar kooban oo ka timid Xarunta Sare ee Caafimaadka Qaxootiga Jaamacadda Minnesota waxay tafaasiil ka bixisay qaar ka mid ah tixgalinta iyo natiijooyinka guud ee ka yimid dhakhaatiirta ururka ee daaweeyay qaxootiga Afgaanistaan.
Ilaha dheeraadka ah ee kooxda shaqada ee Hagitaanka Kiliinikada ee Afgaanistaan
"Tixgelinta Tixgelinta Dhaqanka iyo Caafimaadka Afgaanistaan" - Webinar 1.5-saac ah oo xog badan leh oo daboolaya macluumaad badan oo wanaagsan oo loogu talagalay daaweeyayaasha iyo kuwa kale ee ku jira daryeelka caafimaadka si ay u ogaadaan qaxootiga Afgaanistaan ​​soo galaya.
Webinar: "Dhaqanka ugu wanaagsan ee ka hortagga COVID-19 iyo yaraynta bulshooyinka Afgaanistaan"
Qowmiyad: Waa goob ay martigelisay Xarunta Caafimaadka ee Harborview oo ka kooban macluumaadka caafimaadka iyo dhaqanka ee ku saabsan kooxaha soogalootiga iyo qaxootiga.
Waaxda Caafimaadka ee Gobolka Washington: Barnaamijka Caafimaadka Qaxootiga
Waaxda Caafimaadka ee Gobolka Washington: Kheyraadka Caafimaadka Afgaanistaan
Koox bixiyayaasha iyo shaqaalaha maamulka oo ka socda HealthPoint, Waaxda Caafimaadka ee Gobolka Washington, Seattle Children's, Harborview iyo ururada kale ee caafimaadka ayaa hadda samaynaya dukumeenti u gaar ah gobolka. Waxaan ku dhejin doonaa halkan marka la helo.